ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး Bugatti La Voiture Noire စူပါကားကို ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒို – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတစ်စီးတည်းသာရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားခြင်းခံရတဲ့ ဘူဂတ်တီ La Voiture Noire စူပါကားရဲ့ ပိုင်ရှင်က ပေါ်တူဂီဘောလုံးအကျော်အမော် ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို (Christiano Ronaldo) ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက လက်ရှိမှာ အတော်လေးကို ပျံ့နှံ့လို့နေပါတယ်။ ဒီလိုသတင်းတွေ ပျံနှံ့နေရတဲ့အကြောင်းကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ တစ်စီးတည်းသာရှိပြီး ၂၀၁၉ ဂျီနီဗာကားပြပွဲမှာ ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပြသခဲ့တဲ့ ဘူဂတ်တီ La Voiture Noire ကားသစ်ကို ရော်နယ်ဒိုက ပေါင် (၉. ၄၉) သန်းနဲ့ ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ သတင်းဌာနတချို့က အခိုင်အမာကို ဖော်ပြနေကြလို့ပါ။ ပြင်သစ်ဇိမ်ခံကားကုမ္ပဏီ ဘူဂတ်တီဟာ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သက် နှစ် (၁၁၀) ပြည့်မြောက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ ဒီကားကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ တစ်စင်းတည်းပဲ ကန့်သတ် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ မတ်လအတွင်းက ကျင်းပတဲ့ ဂျီနီဗာကားပြပွဲမှာ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးကားဖြစ်ခဲ့တဲ့ La Voiture Noire ကားဟာ အခုအချိန်မှာတော့ ရော်နယ်ဒိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဖိုးတန်ကားစာရင်းထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ကနဦးသတင်းတွေမှာတုန်းက ဒီကားကိုဝယ်ယူခဲ့သူဟာ ဗောက်စ်ဝက်ဂွန်ကားကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဌဟောင်း ဖာဒီနန် ပီးခ်ျ ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့ အခုလက်ရှိမှာတော့ ပေါ်တူဂီဘောလုံးအကျော်အမော်ကသာ အမှန်တကယ် ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ စပိန်သတင်းစာ တွေက အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြနေကြပြန်ပါတယ်။ မီလျံနာအားကစားသမားတွေ စာရင်းမှာ ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ ဒီလိုမျိုးအဖိုးတန်ဇိမ်ခံကားတွေ၊ ပြိုင်ကားတွေကို ဈေးကြီးပေးဝယ်ယူစုဆောင်းလေ့ရှိသူ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီကားကို သူဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာ အတော်လေးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့သတင်းလို့ ယူဆလို့ ရနေပါတယ်။ ဘူဂတ်တီ La Voiture Noire ကားကို ၁၉၃၆ နဲ့ ၁၉၃၈ အကြားကာလမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဂန္တဝင် 57 C Atlantic ဘူဂတ်တီကားဒီဇိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီး အဆင့်မြှင့်မွမ်းမံဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ကာ (၈. ဝ) လီတာ W16 တာဘိုအင်ဂျင်ကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် တစ်နာရီကို မိုင် (၂၆၀) နှုန်းထိ မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ အတွက် ပြိုင်စံရှား စူပါကားတစ်စီးလို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။
← လုံခြုံရေးအကြီးအကဲအား မိဖုရားအဖြစ် ထိုင်းဘုရင်ရွေးချယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်စိုး တိုင်း ခရိုင် မြို့နယ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက် →
တန်းတက် အလာဗက်စ်နှင့် ဘာစီလိုနာ ကိုပါဒယ်ရေးဖလား ဗိုလ်လုမည်
February 10, 2017 USDP 2016 Comments Off on တန်းတက် အလာဗက်စ်နှင့် ဘာစီလိုနာ ကိုပါဒယ်ရေးဖလား ဗိုလ်လုမည်